Itiyoophiyaan nama vaayiresiin koronaa keessatti argame tokko itti dabalaa jiraachuu mirkaneessite. Kunis lakkobsa namoota vaayiresichaan qabamanii 12n ga’ee jira. Ministeerri eegumsa fayyaa Liyaa Taaddesee akka jedhanitti namni boodana qabame ga’eessa umuriin waggaa 34 Dubaayitti imalee deebi’e. namoonni 25 isa waliin wal argan moggaatti qoodamaniiru.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahimed dhabbata Jack Ma foundation fi dhaabbata Ali Babaa waliin ta’uu dhaan biyoonni Afriikaaf kan oolu meeshaalee qorannaa, fi ittisuu vaayresii koronaaf ta’u dhiyeessuuf kaka’umsa dandeessisu waliin ta’uun labasanii jiru.
Akkuma kanaan kan dhaabbaia Jck Ma fi Alii babaa meeshaalee ittiin qorannaan geggeessamu gumaachan miliyoona 1.1 Finfinnee seenee jira.
Yaada sana kan dhiyeessan muummicha ministeeraa Abiy waan ta’aniif jecha xayyaara Itiyoophiyaatiin biyyootii Afriikaa 53f raabsamuuf jira. Ministriin eegumsa fayyaa har’a akka beeksisetti meeshaalee kanaaf gargaarsa argame ka biro biyyoota Afriikaaf geessuu eegalaniiru.
Dubbi himaan ministrichaa Dr. Tegene Raggaasaa VOAf akka ibsanitti xayyaarri biyyoonni meeshaaleen kun ergamaniif kan jalqabaa geessuuf keessaa Sudaan, Masrii fi Eertraa dha.